Ch 19 John – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Jaona / Ch 19 John
19:1 Noho izany, Pilato Ary nitondra an'i Jesosy ho am-ponja ka nokapohiny.
19:2 Ary ny miaramila, plaiting satroka tsilo, nametraka izany teo amin'ny lohany. Ary nanisy lamba volomparasy manodidina azy.
19:3 Ary izy ireo nanatona azy sy nanao hoe:, "Arahaba, mpanjakan'ny Jiosy!"Dia namely azy imbetsaka.
19:4 Ary Pilato dia ivelany indray, ary hoy izy taminy: "Indro, Izaho nitondra Azy mivoaka ho eto aminareo, mba tonga saina fa izaho tsy mahita izay raharaha azy. "
19:5 (Ary Jesosy nandeha nivoaka, mitondra ny satro-tsilo sy ny volomparasy lamba.) Ary hoy Izy taminy:, "Indro ny lehilahy."
19:6 Noho izany, raha ny mpisorona avo sy ny mpanompo efa nahita Azy, dia niantso izy, nanao hoe:: "Homboy amin'ny hazo fijaliana Izy! Homboy amin'ny hazo fijaliana izy!"Pilato hoy izy taminy: "Entonareo Izy ka homboy amin'ny hazo fijaliana Izy. Fa izaho tsy mahita tranga azy. "
19:7 Ny Jiosy namaly Azy, "Izahay manana lalàna, ary araka ny lalàna, dia tokony ho faty, fa izy efa nanao ny tenany ho Zanak'Andriamanitra. "
19:8 Noho izany, nony efa nandre izany Pilato teny, dia vao mainka saro-tahotra.
19:9 Ary niditra tao anati-rova indray. Ary hoy izy tamin'i Jesosy. "Avy aiza ianao?"Fa Jesosy tsy nanome azy valin-.
19:10 Noho izany, Hoy Pilato taminy: "Moa tsy miresaka amiko? Tsy fantatrao angaha fa manana fahefana hohomboany amin'ny hazo fijaliana anao, sady manana fahefana hanafaka anao?"
19:11 Jesosy namaly, "Ianao dia tsy misy manam-pahefana ahy, raha tsy nomena anao avy any ambony. Izany no antony, izay efa nanolotra ahy eo taminao no manan-keloka bebe kokoa. "
19:12 Ary avy dia tamin'ny, Pilato dia nitady handefa Azy. Fa ny Jiosy niantsoantso, nanao hoe:: "Raha alefanao io Lehilahy io, ianao no tsy naman'i Kaisara. Fa na iza na iza manao ny tenany ho mpanjaka mifanohitra an'i Kaisara. "
19:13 Ary nony efa ren'i Pilato izany teny izany, dia nitondra an'i Jesosy ivelany, ary nipetraka teo amin'ny seza fitsarana, eo amin'ny toerana izay atao hoe Lampivato, fa amin'ny teny Hebreo, izany dia antsoina hoe Ny isam-ponina.
19:14 Ary andro fiomanana amin'ny Paska ny andro, tokony ho tamin'ny ora fahenina. Ary hoy izy tamin'ny Jiosy, "Indro ny mpanjaka."
19:15 Fa izy kosa no niantsoantso: "Haka Azy! Haka Azy! Homboy amin'ny hazo fijaliana izy!"Pilato hoy izy taminy, "Va Hohomboako amin'ny hazo fijaliana ny mpanjaka?"Namaly ny mpisorona avo, "Tsy manana mpanjaka afa-tsy Kaisara."
19:16 Noho izany, Avy eo izy dia nanolotra azy mba hohomboana amin'ny hazo fijaliana azy. Ary izy ireo nisambotra an'i Jesosy ka nitondra an'i Jesosy ho.
19:17 Ary mitondra ny hazo fijaliana, dia nandeha ho any amin'ny tany izay atao hoe Kalvary, fa amin'ny teny Hebreo dia atao hoe ny toerana ny Ikarandoha.
19:18 Tao no nanomboany tamin'ny hazo fijaliana, ary nisy roa lahy koa niaraka taminy, iray isaky ny lafiny, amin'i Jesosy teo afovoany.
19:19 Ary Pilato nanoratra anarana ihany koa, dia napetrany teo ambonin'ny hazo fijaliana. Ary nosoratana: JESOSY AVY ANY NAZARETA, MPANJAKAN'NY JIOSY.
19:20 Noho izany, maro tamin'ny Jiosy mamaky ity anaram-boninahitra, Fa ny tany izay nanomboana an'i Jesosy dia akaikin'ny tanàna. Ary voasoratra tamin'ny teny Hebreo, amin'ny teny grika, ary amin'ny teny latinina.
19:21 Ary ny avo mpisorona tamin'ny Jiosy dia nanao tamin'i Pilato: Aza soratana, 'Mpanjakan'ny Jiosy,', Fa hoy izy:, 'Izaho no Mpanjakan'ny Jiosy.'
19:22 Pilato namaly, "Izay voasoratro, Dia voasoratro. "
19:23 Ary ny miaramila, rehefa voahombony tamin'ny hazo fijaliana Izy, dia nalainy ny fitafiany, ka dia nozarainy efatra, anjara iray ho isan-miaramila, ary ny akanjo lava. Fa ny akanjo lava dia seamless, tenona avy any ambony nandritra ny manontolo.
19:24 Dia hoy ireo olona hafa, "Aoka isika tsy handringana azy, fa kosa aoka isika filokana noho izany, ny mahita izay dia ho. "Izany dia mba hahatonga ny Soratra Masina ho tanteraka, nanao hoe:: "Efa nozaraina ny fitafiany ireo, ary noho ny lambany izy nanaovany loka. "Ary tokoa, ny miaramila nanao izany zavatra izany.
19:25 Ary nitsangana teo akaikin'ny hazo fijalian'i Jesosy ny reniny no, sy ny rahavavin-dreniny, sy Maria Klopa, sy Maria Magdalena.
19:26 Noho izany, rehefa nahita i Jesosy ny reniny sy ilay mpianatra tiany nijanona teo, dia hoy Izy tamin'ny reniny, "Woman, indro ny zanakao. "
19:27 Manaraka, dia hoy Izy tamin'ilay mpianatra, "Indro ny reninao." Ary tamin'izany ora izany, ny mpianatra nanaiky azy ho ny.
19:28 Rehefa afaka izany,, Fantatr'i Jesosy fa efa tanteraka daholo, ka mba ny Soratra Masina mba ho vita, hoy izy:, "Mangetaheta Aho."
19:29 Ary nisy fitoeran-javatra napetraka tao, feno vinaingitra. Avy eo, mametraka ny spaonjy feno vinaingitra nipetraka manodidina ny hysopa, dia nitondra azy ho ao am-bavany.
19:30 Avy eo Jesosy, rehefa nandray ny vinaingitra, nanao hoe:: "Efa lany." Dia niankohoka teo ny lohany, dia nitolo-batana ny fanahiny.
19:31 Ary ny Jiosy, satria andro fiomanana ny andro, ka ny vatana tsy hitoetra eo amin'ny hazo fijaliana amin'ny andro sabata (fa Sabata ny andro lehibe), ka nitalaho tamin'i Pilato, mba fa ny tongony mba ho tapatapaka, ary mba ho hesorina.
19:32 Noho izany, ny miaramila nanatona, ary, tokoa, dia nanapaka ny ranjon'ny voalohany, sy ny an'ny anankiray koa izay niaraka nohomboana taminy.
19:33 Kanjo rehefa nanatona an'i Jesosy, raha nahita fa efa maty sahady, dia tsy mba notapahiny ny ranjony.
19:34 Fa tsy, iray tamin'ireo miaramila nanokatra ny lafiny amin'ny lefona, ary niaraka tamin'izay dia nisy nandeha rà sy rano.
19:35 Ary izay nahita izany dia nanolotra fijoroana ho vavolombelona, ary marina ny fanambarany. Ary fantany fa milaza ny marina, ka dia ianareo koa mba mino.
19:36 Fa izany dia nanjo ny Soratra Masina mba ho tanteraka: "Ary tsy hotapahiny ny taolany ny azy."
19:37 Ary indray, Hoy ny Soratra Masina hafa: "Dia hijery izy, izay efa Zak. "
19:38 Avy eo, Rehefa afaka izany,, I Josefa avy any Arimatia, (satria mpianatr'i Jesosy izy, nefa tamin'ny mangingina ihany noho ny fahatahorany ny Jiosy) Nangataka mba Pilato, mba hahazoany manaisotra ny fatin'i Jesosy. Ary Pilato dia nanome alalana. Noho izany, Dia lasa izy ka nanaisotra ny fatin'i Jesosy.
19:39 Ary tonga koa Nikodemosy, (izay efa lasa amin'i Jesosy nony alina tamin'ny voalohany) nitondra ny mifangaro ny miora sy ny Aloe, milanja tokony ho fito-polo kilao.
19:40 Noho izany, dia naka ny fatin'i Jesosy, Dia namatotra azy tamin'ny lambam-paty sy ny zava-manitra, araka ny fanaon'ny Jiosy raha mamboatra faty halevina.
19:41 Ary any amin'ny tany izay nohomboana tamin'ny hazo fijaliana nisy saha, ary teo anatin'ilay saha nisy fasana vaovao, izay tsy nisy mbola nametraka.
19:42 Noho izany, noho ny andro fiomanan'ny Jiosy andro, satria teo akaiky teo ilay fasana dia, dia nametraka an'i Jesosy teo.